United Arab Emirates President and Emir of Abu Dhabi dies | United Arab Emirates
Location: musha » Kutumira » Nyika | Dunhu » Mubatanidzwa Arabhu Emeretsi » Mutungamiri weUnited Arab Emirates uye Emir we Abu Dhabi anofa
Mutungamiri weUnited Arab Emirates uye Emir we Abu Dhabi anofa
Mutungamiri weUnited Arab Emirates Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan
Emirates News Agency (WAM) yakashuma kuti Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan afa, uye Emir we Abu Dhabi uye Mutungamiriri weUnited Arab Emirates (UAE) vafa. Sheikh Khalifa aive makumi manomwe nematatu uye anga achirwara nechirwere kwemakore akati wandei.
"Bazi rezveMutungamiriri weNyika rakazivisa kuti kuchave nemazuva makumi mana ekuchema zviri pamutemo nemireza pahafu-yepamusoro uye kuvharwa kwemazuva matatu kwemahofisi nemasangano ari pamutemo mumatunhu emubatanidzwa nevenzvimbo neakazvimiririra," WAM yakatumira paTwitter nhasi.
Sheikh Khalifa anga asingawanzo kuonekwa paruzhinji kubva paakarwara nesitiroko muna 2014, aine mukoma wake, Abu Dhabi's Crown Prince Mohammed bin Zayed (anozivikanwa seMBZ) achionekwa semutongi we de facto uye mutongi wezvisarudzo zvikuru zvekunze kwenyika, senge. kujoinha hondo inotungamirwa neSaudi muYemen uye kutungamira kurambidzwa kune vavakidzani Kwata mumakore achangopfuura.
"The Brazil yarasikirwa nemwanakomana wayo akarurama uye mutungamiri we'chikamu chekusimudzira' uye muchengeti werwendo rwayo rwakaropafadzwa," MBZ yakadaro paTwitter, ichirumbidza hungwaru nerupo rwaKhalifa.
Pasi pebumbiro remitemo, Mutevedzeri weMutungamiriri weNyika uye Mutungamiriri Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, mutongi weDubai, achaita semutungamiri kusvikira kanzuru yemubatanidzwa inounganidza vatongi vevamiriri vanomwe vasangana mukati memazuva makumi matatu kuti vasarudze mutungamiri mutsva.
Manyaradzo akatanga kuuya kubva kuvatungamiri vechiArab, vanosanganisira mambo weBahrain, mutungamiri weEgypt uye mutungamiriri weIraq.
Munyori weUnited States of State, Antony Blinken, vasvitsa mashoko enyaradzo parufu rwaSheikh Khalifa, wavakatsanangura se "shamwari yechokwadi yeUnited States".
“Takakoshesa zvikuru rutsigiro rwake mukuvaka kudyidzana kunoshamisa kwenyika dzedu nhasi. Tinochema kufa kwake, kukudza nhaka yake, uye tinoramba takazvipira kuhushamwari hwedu hwakasimba nekushandira pamwe neUnited Arab Emirates,” akadaro.
Sheikh Khalifa akatanga kutonga muna 2004 mune akapfuma emirate Abu Dhabi uye akava mukuru wenyika. Anotarisirwa kuteverwa semutongi we Abu Dhabi naCrown Prince Sheikh Mohammed.
Abu Dhabi, uyo ane hupfumi hwakawanda hweGulf state, akabata chigaro chemutungamiri wenyika kubva pakavambwa mubatanidzwa weUAE nababa vaSheikh Khalifa, mushakabvu Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, muna 1971.
Mutevedzeri weMutungamiriri weWorld Tourism Network weGlobal Affairs, Alain St. Ange akati: “WTN inonzwira tsitsi mhuri, Hurumende neVanhu veUAE pakushaya kwaHis Highness Sheikh Khalifa, mutongi weUAE. Hukuru hwake aive mugadziri wechokwadi weNyika yake uye acharasikirwa neshamwari dzese dzeUAE.
"Panzvimbo yevatungamiriri veWTN kubva kuCommunity of Nation uye ini pachangu ndapota gamuchirai tsitsi dzechokwadi munguva ino yakaoma."
Abu Dhabi Sheikh Twitter Mubatanidzwa Arabhu Emeretsi Yemeni
Jamaica Inogamuchira "Hot Ones Caribbean"
Abu Dhabi 31st International Book Fair inoburitsa chirongwa chinofadza
10 vanhu vakapfurwa paNew York City subway
Cultural Tourism muItaly Ichadzoka Yakakura Nguva
New Innovative Nerve Repair Solution
Starches/Glucose Market Stakeholders NeCovid-19...
Nyowani Pivotal Phase 3 Oral Insulin Kudzidza
Qantas inoda Airbus yendege nyowani dzisingamire kuenda kuLondon...
Manchester United yakasiya chibvumirano chekutsigira Aeroflot
SKAL Madrid neParis Kuisa Mafambiro Matsva paMaitiro...
Ankylosing Spondylitis Kurapa Musika Saizi, Govera...
Ultra-Yakaderera-Mutengo Wendege Inopa New Canada Flights
Qatar Airways inodyidzana neMalaysia Airlines
Fraport: Kukwira kwemaitiro emufambi traffic inoenderera mberi ...
United Airlines: San Francisco kuenda kuMelbourne nendege...
Jamaica Inogashira Ndege Itsva yeNonstop Frontier Airlines...
Nzvimbo yeAsia-Pacific iri kuona kuwedzera kwekuda kwe ...
Timeshare Muridzi Zvakavanzika Zvakafumurwa
Swiss Graubunden inoda vashanyi vakawanda kubva kuGulf...
Vafambi veDutch vanoda Bali uye KLM: Mutambo weThe...
Alzheimer's Association yakaodzwa mwoyo nesarudzo pa...
Martinique Tourism Authority Commissioner anozivisa ...
Marriott International Inc. inomisa bhizinesi rese idzva...
Panama Skydiving Inoisa Tsika Itsva mukushevedzera ...
Sirens Market: Global Indasitiri Ongororo uye...
Mufananidzo waWarhol waMarilyn Monroe ikozvino wakanyanya ...
Kubvumidzwa Kutsva Kwemushonga Kurapwa Kwekuzvimba Kwemaziso...
Julia Simpson anotaura paWTTC Global Summit 2022
Harry Johnson anga ari iye mupepeti wedhisheni we eTurboNews kwemakore anopfuura 20. Anogara kuHonolulu, Hawaii, uye anobva kuEurope. Anofarira kunyora uye kuvhara nhau.